Varahina famatsoam-bolo avo ho an'ny fantsona varahina
Varahina famatsoam-bolo avo ho an'ny paosin'ny varahina
tanjona: Fampidirana varahina amin'ny fantsom-by
Fitaovana: DW-UHF-6KW-III mpamahana fanamafisam-bolo famoronana tanana
Akora: Paipa enina (9.5 mm)
Temperature: 1475 ° F / 800 ° C
Time: 20 segondra
The DW-UHF-6KW-III rafitra fanamboarana fitaovam-piasan'ny tanana miaraka amin'ny robot afaka mandoa fehiloha marindrano maro mifangaro amin'ny toerana efa nofaritana mialoha. Ho an'ny fangatahana mampivarahontsana azy dia nisy mpiompy tariby iray napetaka ho an'ny mpanafosin-tsoavaly DW-UHF-6KW-III, izay mameno ny fika eo amin'ny tonon-varahina. Nisy zezika azotaina koa nampiana mba hampihenana ny fitrandrahana ny tonon-taolana, izany dia manampy amin'ny fanalefahana ny fomba fanadiovana ny fehim-boto. Ny rafitra robotic dia namboarina mba hifindra isaky ny fiarahany ary hampiasa hery mandritra ny fotoana voafetra mialoha. Izany dia miantoka ny dingana famerenam-bolo miverimberina ary azo ianteherana. The indostrian'ny brazing ny varahina ka ny varahina dia notanterahina tamim-pahombiazana tao anatin'ny 20 segondra isaky ny fiarahany amin'ny 1475 ° F.
Tazomina ny DW-UHF-6KW-III induction brazing Ny mpamaly dia mety amin'ny fametahana tsy misy ahiahy amin'ny vata fampangatsiahana vata fampangatsiahana, mpanova hafanana, fitaovana momba ny trano sy ny fivorian'ny HVAC.
Sokajy Technologies Tags brazing copper, Fanadiovana fitaovana varahina, rafitra varahina mirehitra, milina varahina, varahina fantsom-baravarana varahina, Fantsakan-drano varahina mandrobona, Fiovan'ny hafanana hafanana varahina, fantsona varahina avo frezy matetika, induction brushing copper, fantsom-by varahina fantsom-borona, milina varahina fandoroana varahina, Fantsona varahina RF Post Fikarohana
fanosihosena vy stainless vy ho an'ny vy